OG Dota2 ရဲ့ လူစားဝငျ ကစားသမား “W1sh-“ ဆိုတာ ဘယျသူလဲ? – Gaming Noodle
OG Dota2 ရဲ့ လူစားဝငျ ကစားသမား “W1sh-“ ဆိုတာ ဘယျသူလဲ?
OG အသငျးဟာ လာမယျ့ WePlay! Dota2 Pushka League ကို ဝငျရောကျကစားမယျ့ လူစာရငျးကို လှနျခဲ့တဲ့ နာရီပိုငျးက ကွညောခဲ့ပါတယျ။ WePlay! Pushka League ဟာ ဥရောပနဲ့ CIS က အကောငျးဆုံး Dota2 အသငျးတှေ League ပုံစံ ပါတျလညျစနဈဖွငျ့ ယှဉျပွိုငျရမယျ့ ပွိုငျပှဲသဈတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
OG အသငျးဟာ Europe အုပျစုမှာ Alliance, Ninja in Pyjamas, Nigma, Team Secret, Team Liquid, OG Seed တို့နဲ့အတူ ကရြောကျနတောပဲ ​ဖွဈပါတယျ။ အုပျစု ထိပျဆုံး (၄) သငျးဟာ ရှုံးထှကျအဆငျ့မှာ CIS မှ အသငျးမြားနဲ့ ယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပွီး စုစုပေါငျး ဆုကွေးကတော့ ဒျေါလာ (၂၅၀,၀၀၀) ဖွဈပါတယျ။
WePlay! Dota2 Pushka League မှာ ကစားမယျ့ OG ရဲ့ လူစာရငျးကတော့
OG ရဲ့ Mid နဲ့ Offlane ဖွဈတဲ့ Topson နဲ့ MidOne တို့ဟာ COVID-19 ပွနျ့ပှားနခြေိနျ မလေးရှားနိုငျငံကို ရောကျရှိနတောဖွဈမလို့ OG အသငျးနဲ့ လာရောကျ မပူးပေါငျးနိုငျသေးပါဘူး။
ယခု WePlay! Pushka League မှာတော့ Offlane နရောမှာ လူဟောငျးတဈဦးဖွဈသူ Ceb ပါဝငျကစားပမေယျ့ Mid နရောမှာတော့ မကျြနှာသဈကစားသမား တဈဦးဖွဈတဲ့ “W1sh-“ဆိုတဲ့ကစားသမား ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ Ana နဲ့ Topson လိုမြိုး လူမသိ သူမသိ ကစားသမားတှကေို အရောငျတငျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ အခု လူစားဝငျ ကစားသမားအသဈ “W1sh-“ အကွောငျးကို တျောတျောမြားမြားက စိတျဝငျစားနကွေပါပွီ။
W1sh- ဆိုတာ ဘယျသူလဲ?
W1sh ဟာ လူဦးရေ (၅) သနျးခနျ့သာရှိတဲ့ “ဂြျောဂြီယာ” နိုငျငံသားတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ အသကျ (၂၂) နှဈရှိပွီး Mid Role ကို အဓိက ကစားသူ ဖွဈပါတယျ။
W1sh when he was playing for Wind and Rain
Dota2 ကစားသမား သကျတမျးတဈလြှောကျ Unchained Esports, Wind and Rain, Godsent အစရှိတဲ့ Tier 2/3 အသငျးတှမှောပဲ ကစားခဲ့တဲ့အတှအေ့ကွုံ ရှိပါတယျ။ Godsent အသငျးမှာလညျး မတျလမှာ နောကျဆုံးကစားခဲ့တာ ဖွဈပွီးယခု လကျရှိ Godsent နဲ့ စာခြုပျရှိမရှိကိုတော့ သခြောမသိရသေးပါဘူး။
ထူးခွားတာကတော့ W1sh ဟာ လကျရှိ Dota2 Leaderboard (Europe) မှာ အဆငျ့ (၂၉) နရောအထိ ရောကျရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထို့အပွငျ Dotabuff အခကျြအလကျမြားအရ သူရဲ့ ပှဲအမြားဆုံး ကစားထားတဲ့ Hero က “Invoker” ဖွဈပွီး ပှဲပေါငျး (၈၀၀) ကြျောနဲ့ Win Rate 59% ရှိနပေါတယျ။
ပုံမှနျဆိုရငျ Stand-in ကစားသမားတဈယောကျ လူစားထိုး ဝငျကစားတယျဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တဈခါမှ နာမညျမကွားဖူးတဲ့ ကစားသမားတှကေို ချေါယူပွီး TI ယူနကေဖြွဈတဲ့ OG မှာ ဝငျကစားမှာဖွဈလို့ ယခုလို ရှာဖှတေငျဆကျလိုကျရတာ ဖွဈပါတယျ။
WePlay Pushka League ကိုတော့ မလေ (၁၂) ရကျနအေ့ထိ ယှဉျပွိုငျမှာ ဖွဈပွီး OG ကတော့ ဧပွီ (၂၈) မှာ Alliance နဲ့ စတငျယှဉျပွိုငျရမှာပါ။ N0tail နဲ့ Ceb တို့ရဲ့ ထိမျးကြောငျးမှုနဲ့အတူ W1SH တဈယောကျ Mid မှာ ဘယျလို ကစားပွမယျဆိုတာ ကွညျ့ရှုဖို့ မစောငျ့စားနိုငျတော့ပါဘူး။
OG Dota2 ရဲ့ လူစားဝင် ကစားသမား “W1sh-“ ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
OG အသင်းဟာ လာမယ့် WePlay! Dota2 Pushka League ကို ဝင်ရောက်ကစားမယ့် လူစာရင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ WePlay! Pushka League ဟာ ဥရောပနဲ့ CIS က အကောင်းဆုံး Dota2 အသင်းတွေ League ပုံစံ ပါတ်လည်စနစ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ပြိုင်ပွဲသစ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
OG အသင်းဟာ Europe အုပ်စုမှာ Alliance, Ninja in Pyjamas, Nigma, Team Secret, Team Liquid, OG Seed တို့နဲ့အတူ ကျရောက်နေတာပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စု ထိပ်ဆုံး (၄) သင်းဟာ ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ CIS မှ အသင်းများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ဆုကြေးကတော့ ဒေါ်လာ (၂၅၀,၀၀၀) ဖြစ်ပါတယ်။
WePlay! Dota2 Pushka League မှာ ကစားမယ့် OG ရဲ့ လူစာရင်းကတော့
OG ရဲ့ Mid နဲ့ Offlane ဖြစ်တဲ့ Topson နဲ့ MidOne တို့ဟာ COVID-19 ပြန့်ပွားနေချိန် မလေးရှားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်မလို့ OG အသင်းနဲ့ လာရောက် မပူးပေါင်းနိုင်သေးပါဘူး။
ယခု WePlay! Pushka League မှာတော့ Offlane နေရာမှာ လူဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ Ceb ပါဝင်ကစားပေမယ့် Mid နေရာမှာတော့ မျက်နှာသစ်ကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “W1sh-“ဆိုတဲ့ကစားသမား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Ana နဲ့ Topson လိုမျိုး လူမသိ သူမသိ ကစားသမားတွေကို အရောင်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အခု လူစားဝင် ကစားသမားအသစ် “W1sh-“ အကြောင်းကို တော်တော်များများက စိတ်ဝင်စားနေကြပါပြီ။
W1sh- ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
W1sh ဟာ လူဦးရေ (၅) သန်းခန့်သာရှိတဲ့ “ဂျော်ဂျီယာ” နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၂၂) နှစ်ရှိပြီး Mid Role ကို အဓိက ကစားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
Dota2 ကစားသမား သက်တမ်းတစ်လျှောက် Unchained Esports, Wind and Rain, Godsent အစရှိတဲ့ Tier 2/3 အသင်းတွေမှာပဲ ကစားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ ရှိပါတယ်။ Godsent အသင်းမှာလည်း မတ်လမှာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးယခု လက်ရှိ Godsent နဲ့ စာချုပ်ရှိမရှိကိုတော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး။
ထူးခြားတာကတော့ W1sh ဟာ လက်ရှိ Dota2 Leaderboard (Europe) မှာ အဆင့် (၂၉) နေရာအထိ ရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Dotabuff အချက်အလက်များအရ သူရဲ့ ပွဲအများဆုံး ကစားထားတဲ့ Hero က “Invoker” ဖြစ်ပြီး ပွဲပေါင်း (၈၀၀) ကျော်နဲ့ Win Rate 59% ရှိနေပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် Stand-in ကစားသမားတစ်ယောက် လူစားထိုး ဝင်ကစားတယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ နာမည်မကြားဖူးတဲ့ ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူပြီး TI ယူနေကျဖြစ်တဲ့ OG မှာ ဝင်ကစားမှာဖြစ်လို့ ယခုလို ရှာဖွေတင်ဆက်လိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
WePlay Pushka League ကိုတော့ မေလ (၁၂) ရက်နေ့အထိ ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး OG ကတော့ ဧပြီ (၂၈) မှာ Alliance နဲ့ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ N0tail နဲ့ Ceb တို့ရဲ့ ထိမ်းကျောင်းမှုနဲ့အတူ W1SH တစ်ယောက် Mid မှာ ဘယ်လို ကစားပြမယ်ဆိုတာ ကြည့်ရှုဖို့ မစောင့်စားနိုင်တော့ပါဘူး။